Fahadisoam-pananahana be dia be tamin'ny tetibola fizahan-tany India
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Fahadisoam-pananahana be dia be tamin'ny tetibola fizahan-tany India
Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana India • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Satria manantena hahita fomba hanombohana fanasitranana amin'ny areti-mandringana COVID-19 izao tontolo izao, na amin'ny fahasalamana izany na amin'ny toe-karena, ny teti-bolan'ny fizahan-tany India dia nivadika ho fahadisoam-panantenana lehibe ho an'ireo mpilalao indostria.
Betsaka ny diso fanantenana amin'ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fandraisam-bahiny izay manantena ny fanamaivanana amin'ny teti-bolan'ny fizahan-tany any India natolotry ny minisitry ny vola Nirmala Sitaraman. Nomarihin'ny mpitarika namaky ireo fikambanana maro fa misy fotoana very indray mamelombelona ny sehatry ny asa, izay mahavita be amin'ny toekarena amin'ny asa sy ny harin-karena faobe.
Rajendera Kumar, filohan'ny FHRAI taloha ary talen'ny masoivoho, dia nanenina noho ny fiheverana ny indostrian'ny fandraisam-bahiny. Nomarihiny fa nandritra ny valanaretina COVID-19, ireo hotely dia tsy nandroaka mpiasa ary nanohy nanampy ny toekarena. Nilaza i Kumar fa ny tetibola dia fotoana mety hanampiana ny fizahan-tany hiverina fa very izany.
Ny sekretera jeneralin'ny finoana, Subhash Goyal, dia nanipika fa asa an-tapitrisany no atahorana, ary io no fotoana lehibe nananganana ny sehatra. Tsy nisy resaka momba ny sehatry ny serivisy, hoy ihany izy.
Ny teti-bolan'ny fizahantany dia nitentina 18 isan-jato, nanomboka tamin'ny crore rs2499 tamin'ny taona 2020 ka hatramin'ny croresy rs2032 tamin'ny 2021. Na izany aza, ny minisitry ny fizahantany P. Patel dia nahatsapa fa ny fizahantany fizahan-tany dia tokony hatsangana satria ny tobin'ny fahasalamana dia hatsangana any ambanivohitra sy an-tanàn-dehibe.
Ny filohan'ny IATO P. Sarkar dia nilaza fa nandiso fanantenana ny tetibola satria tsy misy resaka momba ny fizahantany, na dia misy aza ny fanantenana marobe avy amin'izany.
Ny filohan'ny TAAI Jyoti Mayal dia nahatsapa fa na dia hisondrotra aza ny tetikasan'ny fotodrafitrasa, tsy nisy resaka momba ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany na dia betsaka aza ny mitondra ny harinkarena faobe.
"Mahatsiaro ho very saina izahay," hoy ny filoha lefitry ny FHRAI, GS Kohli.
Nanontany tena ny filohan'ny fikambanan-trano PP Khanna fa hanao ahoana ny teti-dratsy toa ny fahitana ny toerana eo an-toerana raha tsy misy vola. Ireo mpiasan'ny biraon'ny asan'ny mpitsangatsangana sy fikambanana ivelany dia naneho ihany koa ny alahelony tamin'ny fitsaboana natao tamin'ny fizahan-tany.
Ny talen'ny fitantanana ny Noor Mahal, Andriamatoa Roop Partap, dia nilaza izao momba ny tetibola: "Na dia tsy nanolotra fanampiana lehibe ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany aza ny tetibola, manome 1.15 lk cr ho an'ny lalamby sy ny fanamoriana ny seranam-piaramanidina. ny governemanta dia nanome fanampiana kely ho an'ny fizahantany anatiny. Ny fanentanana manokana amin'ny fampandrosoana fotodrafitrasa eo an-toerana dia tena handrisika ny fandraisana vahiny, fitsangatsanganana ary fizahantany. Ny fampiroboroboana ny tambajotram-pifandraisana manerana ny firenena dia manome ny mpilalao isam-paritra sy mitokana, amin'ny toerana heverina ho tsy misy ny tambajotra lehibe, fotoana mety hifaninana amin'ireo faritry ny fandraisam-bahiny lehibe. Ny fivoaran'ny fotodrafitrasa hafa any an-tanànan'ny Tier II dia mety hanampy ny fitomboan'ny isan'ny mpilalao fandraisam-bahiny isam-paritra ary mety hamadika ny tranga rehetra ato ho ato.
"Ny indostria dia nanantena fatratra ny famatsiam-bola sy fampindramam-bola amin'ny alàlan'ny tetibolan'ny sendika. Ny tontolo ara-bola marefo kokoa sy mandefitra dia afaka nanohana ireo mpilalao fandraisam-bahiny madinidinika hizaha làlana fitomboana bebe kokoa amin'izao fotoan-tsarotra izao. Mba hamporisihana ny fibodoan'ny vahiny, hampisondrotra ny fivezivezena ao an-toerana ary hanampiana ireo fananana kely / tsy miankina hanana fifaninanana bebe kokoa eny an-tsena, ny GST amin'ny famandrihana efitrano koa dia tokony hahena hatramin'ny 18% ka hatramin'ny 10% satria ny ezaky ny governemanta manohana ny indostria amin'ny lalan'ny fanarenana. "
Ny talen'ny fitantanana ny SOTC Travel Vishal Suri dia nilaza fa: "Ny Tetibola natolotry ny Union 2021 dia nifantoka tamin'ny fotodrafitrasa, ny fambolena, ny fahasalamana, ny fanabeazana ary ny sehatry ny indostria. Na dia tsy niresaka mivantana aza ny Tetibolan'ny Vondrona 2021 tamin'ny fitakiana maro notontosain'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany, dia niresaka ny filàna azo ianteherana izay miasa ho fampitaovana ny sehatry ny fotodrafitrasa. Misy lalantsara ara-toekarena bebe kokoa kasaina hanamafisana ireo fotodrafitrasa amina làlana miaraka amin'ny fanolorana 1.18 Lakh Crore.
“Nametraka tanjona kendrena amin'ny fananganana fotodrafitrasa ao amin'ny firenena ny governemanta miaraka amina [tetika] manokana handrisihana ny fanjakana handany bebe kokoa ny teti-bolan'izy ireo amin'ny fotodrafitrasa, manome Rs 1.10 Lakh Crore ho an'ny lalamby, hanavotany ny seranam-piaramanidina ary [ny] lalamby Indiana drafitry ny lalàm-pirenena ho an'i India hanomanana rafitra lalamby vonona amin'ny ho avy amin'ny 2030. Ireo dia mandray anjara amin'ny fitomboana maharitra eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Amin'ireo seranam-piaramanidina hasiana privatisées amin'ny tanàna 2 sy 3, hanatsara ny fifandraisan'ny faritra izany. Ny fiatrehana ny ahiahy toy ny fanilihana eo noho eo / fanamarinana ny TCS 5% ho an'ny fizahan-tany any ivelany, ny fanamarinana ny hetra dia hiteraka tosika ilaina amin'ny sehatry ny fizahantany. "